မော်လမြိုင်က ကျိုက်ခမီရေလည်ဘုရား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » မော်လမြိုင်က ကျိုက်ခမီရေလည်ဘုရား
Posted by weiwei on Jan 3, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 14 comments
wei's photos ကျိုက်ခမီ မော်လမြိုင်အမှတ်တရ
မော်လမြိုင်ဆိုတာနဲ့ ကျိုက်ခမီဘုရားကို အရင်ဆုံးသတိရကြပါလိမ့်မယ်။ မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကနေ တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက် ကားစီးသွားရပါတယ်။ မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ကျိုက်ခမီကို ရောက်တယ်။ လမ်းတလျှောက် မျက်စိတဆုံးမြင်ခဲ့ရတဲ့ ရော်ဘာပင်တွေက မွန်ပြည်နယ်ကို ချမ်းသာတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုလို့ သက်သေပြနေသလိုပါပဲ။
ဘုရားကိုရောက်တော့ မနက် ၉ နာရီအချိန်ပါ။ ပိတ်ရက်မဟုတ်လို့ ဘုရားဖူးတဲ့လူတွေ သိပ်များများမတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ဘုရားကိုသွားရတဲ့လမ်း (နတ်လမ်းလို့ခေါ်တယ်ထင်တာပဲ) ပြုပြင်နေချိန်မို့ အမြင်ထဲမှာ နဲနဲတော့ မျက်စိရှုပ်နေတယ်။ ဓါတ်ပုံလေးတွေ အလွမ်းပြေကြည့်ကြပါအုန်း …
ဘုရားဖူးအဖွဲ့တွေနဲ့သွားရင် ကျိုက်ခမီက ခြေတံရှည်ဇရပ်တွေပေါ်မှာ အိပ်ကြရပါတယ်။ ထမင်းဟင်းချက်စားလို့ရတယ်။ ဘုရားဖူးရာသီတွေမှာ အရမ်းစည်ကားပြီး တည်းခိုရတာ အဆင်မပြေဖြစ်ရလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီဘုရားကိုရောက်တိုင်း အမျိုးသမီးများ မတက်ရဆိုတဲ့လှေကားကိုမြင်လိုက်တိုင်း စိတ်ထဲမှာ ဘ၀င်မကျဖြစ်မိတယ်။
ဘုရားသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် မုဆိုးမတည်ခဲ့တဲ့ဘုရားဆိုတာကလွဲပြီး ပိုမသိပါဘူး။ သိတဲ့သူများရှိရင် ကွန်မန့်ကနေ ပြောပြပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ဝေေ၀ ရောက်တဲ့အချိန်က ရေကျချိန်မို့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။
ကျမတို့သွားတုန်းက အဲဒီဇရပ်တွေမှာ တည်းဖူးတယ်။
တညလုံး ဒီရေတက်တဲ့အသံကြားရတာ မိုးကြီးလေကြီးကျနေသလိုပဲ။
ဇရပ်ပြိုကျမှာ ကြောက်လို့ အိပ်ရတာတောင် စိတ်မဖြောင့်နိုင်ကြဘူး။
အောက်ဆုံးက စနက်ရှော့လေး မိုက်တယ်။
အင်တာနက်ကနေရှာတာ ကျိုက်ခမီသမိုင်း pdf ဖိုင်တွေ့ပေမယ့် download က ကော်နက်ရှင်ကြောင့် အပြည့်မရတာနဲ့ စိတ်မရှည်တော့လို့ ဒီအတိုင်းပဲ တင်ဖြစ်သွားပါတယ် …
ရောက်တော့ ရောက်ဖူးတယ် ခပ်ငယ်ငယ်က ဆိုတော့ မေ့သလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။ အခုတော့ ပြန် နွေးလိုက်သလို ပေါ့။
မြန်မာပြည်ထဲ လှည့်လည် သွားဖို့ စိတ်ကူး ရှိသေးတယ်။
မသွားဖြစ်သေးတာပဲ ရှိတယ်။ ဟိဟိ
အမှတ်မမှားရင်.. အဲဒီအမျိုးသမီးမတက်ရကို.. မိန်းမတက်လို့ရှိရင်..လေနီကြမ်းတိုက်ပြီး.. မိုးကြီးလေကြီးကျတယ်တဲ့…။
အဲဒီကျိုက္ခမီမြို့က.. အင်္ဂလိပ်ခေတ်က.. ခရိုင်ရုံးစိုက်ရာမြို့ထင်တာပဲ..။
ဂျပန်ဝင်တော့ သံဖြူဇရပ်ပြောင်းသွားတာလို့ မှတ်မိတယ်..။
ငယ်ငယ်တုံးက.. အဲဒီခြေတံရှည်ဇရပ်တွေမှာအိပ်ခဲ့ဖူးတယ်..။ အောက်က ၀င်ကစွပ်ကောင်တွေကို ..အခုထိသတိရတုံး…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပုံတွေအတွက်.. ကျေးကျေးကမ္ဘာပါနော..။
ငယ်ငယ်တုန်းက ညဘက်ကြီးရောက်ပြီး အဲဒီမှာအိပ်ဖူးတယ် … အိုးကြီးတွေထဲကရေကို ဒီအတိုင်းခပ်ပြီး ဟင်းချက်ကြ ရေနွေးသောက်ကြနဲ့ … မနက်လင်းတော့ ကြည့်လိုက်တော့မှ ညစ်ပတ်နေတာပဲ (အောက်ခြေမှာ) …
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်က ပွဲတော်ရက်ကြီးတစ်ခါရောက်သွားတာ ဇရပ်တွေအားလုံးလူအပြည့်ပဲ …. အခန်းသေးသေးလေးတစ်ခန်းပဲရပြီး ရေချိုးစရာမရတော့လို့ ရေမချိုးပဲနေခဲ့ရဖူးသေးတယ် ….
ဒီတစ်ခါတော့ မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာပဲ တည်းလိုက်တော့တယ် …
မုဒုံကန်ကြီးအကြောင်း ဓါတ်ပုံနဲ့ပို့စ်တင်ပေးအုန်းမယ် … မိန်းမတွေကို ခွဲခြားခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ နောက်ထပ်နေရာတစ်ခု …
တစ်ခါမှတော့ မရောက်ဖူးသေးဘူး …. ။ လောလောဆယ်တော့ မဝေတင်ပေးတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပဲ သွားဖူးလိုက်ပါတယ် … ။
ဓါတ်ပုံလေးတွေ က အလွမ်ပြေ ဟုတ်ဘူးဗျို့။
ဗဟုသုတ အတွက်ပဲ ကြည့်လို့ရသေးတယ်။
ရောက်ဘူးတဲ့ သူတွေအတွက် တော့ အလွမ်းပြေမှာ သေချာပါတယ်ဗျာ။
thanks for ur photos
မမဝေရေ ကျမတော့ အဲ့ဒီဘုရားကို ၃ ခေါက်လောက်ရောက်ဖူးတယ် ခုတော့ မရောက်ဖြစ်တာ အတော်ကြာပေါ့…..
လပြည့်ညကို ဘုရားစောင်းတန်းပေါ်ကနေ ၀ိုင်းစက်ပြီး လင်းနေတဲ့ လမင်းကြီးကို လှိုင်းပုတ်သံတွေ ကြား လေတဖြူးဖြူးကြား ကနေ ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်…..အဲ့ဒီတုန်းက ရေတွေကလည်းတက်နေတာ …..
မဝေရေ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးလို့ ဗဟုသုတအနေနဲ
လာကြည့်သွားပါတယ် ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးပါနော် ………
ဒီရေ တက်တဲ့အချိန်ဆို ဘုရားပေါ်သွားတဲ့ တံတားခေါ်မလား အဲ့ဒီအပေါ်ထိအောင်ရေရောက်တယ်…..
” အိုးကြီးတွေထဲကရေကို ဒီအတိုင်းခပ်ပြီး ဟင်းချက်ကြ ရေနွေးသောက်ကြနဲ့ … မနက်လင်းတော့ ကြည့်လိုက်တော့မှ ညစ်ပတ်နေတာပဲ (အောက်ခြေမှာ) ”
မြစ်ရေနဲ့နီးတဲ့ ရွာတွေမှာ အဲဒီလို ရေသုံးကြတာ နေ့ခင်း ရွာထဲ လျှောက်သွားလို့ရပေမဲ့ ညဘက်ရောက်ရင် တအိမ်နဲ့တအိမ် လှေနဲ့သွားရတာ သူတို့ကတော့ဒီရေတက်ချိန်သိတာပေါ့နော်.. နေ့ခင်း ရေကိုကြိုက်သလောက်သုံး ညရောက်ရင် ရေအကုန်ပြည့်… ရေချိုးတော့လဲ အိမ်ပေါ်တက်တဲ့ လှေကား အဆင်းလေးမှာ ခပ်ချိုးလိုက်ယုံပဲ…..မိုက်တယ်နော်..:)
ဘုရားဒကာမကြီး ဒေါ်ဝေဝေ ရေ
အခုတော့… ကရင်ပြည်နယ်ဘက် လှည့်ဦးမှာမို့ ….
မရောက်ဖူးသေးဘူး … သွားဖူးချင်ပါတယ်…